The Rising Hawk (2019) | MM Movie Store
ဒီနအေ့တှကျ အမိုကျစား Action , Drama, History ကားလေးကိုတငျပေးခငျြပါတယျ။မှနျဂိုတှေ အငျအားကောငျးခြိနျ ၁၂၀၀ ကြျောခုနှဈကာလကို ဇာတျအိမျတညျထားပါတယျ။
ဉရောပ – အာရှနယျစပျ ယူကရိနျး အမရေိကနျနယျမွေ၊ ကပျသရီသနျတောငျးတနျးဒသေမှာ အေးအေးခမျြးခမျြးနထေိုငျတဲ့ ယူရေးနီးယမျးလူမြိုးတှဟော တောငျယာလုပျ အမဲလိုကျတဲ့လူမြိုးတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီလူမြိုးတှရေဲ့နမွကေို ဂငျြဂဈြခနျရဲ့ မှနျဂိုတပျတှေ ကြူးကြျောတိုကျခိုကျလာတဲ့အခါ….
မိမိနယျမွကေို ဘယျလိုခုခံကာကှယျသှားမလဲဆိုတာ ကွညျ့ရမှာပါ။ သမိုငျးစိတျကူးယဉျဝတ်ထုကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ သမိုငျးကွောငျးတဈခုကိုပွနျလညျ မွငျယောငျထငျမှတျစလေောကျအောငျကောငျးမှနျတာမို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီနေ့အတွက် အမိုက်စား Action , Drama, History ကားလေးကိုတင်ပေးချင်ပါတယ်။မွန်ဂိုတွေ အင်အားကောင်းချိန် ၁၂၀၀ ကျော်ခုနှစ်ကာလကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။
ဉရောပ – အာရှနယ်စပ် ယူကရိန်း အမေရိကန်နယ်မြေ၊ ကပ်သရီသန်တောင်းတန်းဒေသမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်တဲ့ ယူရေးနီးယမ်းလူမျိုးတွေဟာ တောင်ယာလုပ် အမဲလိုက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူမျိုးတွေရဲ့နမြေကို ဂျင်ဂျစ်ခန်ရဲ့ မွန်ဂိုတပ်တွေ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါ….
မိမိနယ်မြေကို ဘယ်လိုခုခံကာကွယ်သွားမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ။ သမိုင်းစိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်လည် မြင်ယောင်ထင်မှတ်စေလောက်အောင်ကောင်းမွန်တာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
9-1-1 (Season 1) ၊ အပိုငျး (၆)